Muxuu isku-casilay danjirihii Ingiriiska u fadhiyay dalka Mareykanka? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muxuu isku-casilay danjirihii Ingiriiska u fadhiyay dalka Mareykanka?
Muxuu isku-casilay danjirihii Ingiriiska u fadhiyay dalka Mareykanka?
Danjiraha dowladda Ingiriiska u fadhiya Mareykanka Kim Darroch ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay is casilaaddiisa kaddib markii si hoose loo dusiyay hadallo uu ku aflgaadeynayey madaxweynaha dalka Mareykan Donald Trump.
Danjire Darroch ayaa ku andacooday in ay adagtahay in si caadi ah uu u sii wato shaqadiisa isla markaana wuxuu dalkiisa ka codasaday in danjire cusub ay soo magacaabaan walow muddo xileedka danjire Darroch uu ku egyahay dhamaadka sanadkan 2019-ka.
“Inkastoo uusan booskeyga shaqo uu ku eg-yahay ilaa iyo laga gaaro dhammaadka sanadkan, haddana, waxaan aamisannahay xaaladdan lagu jirto darteed, inaan aqbalo in la soo magacaabo danjire cusub.”
Darroch, waxa uu ahaa dibmulaasi sare oo Boqortooyada Ingiriiska u joogay Washington tan iyo 2016-kii.
Safiirka Ingiriiska ayaa Trump ku eedeeyey in uu yahay qof aan xasillooneyn islamarkaasina aan laheyn wax xirfad ah, shaqo fiicana aysan ka socon aqalka cad.
Madaxweynaha Mareykanaka ayaa safiirka isna dhankiisa ku eedeeyey khibrad xumo iyo in uu gabay shaqadiisa.
Dowladda Ingiriiska ayaa barbar istaag u muujisay safiirkooda inkastoo ay sheegeen in aragtida safiirka aysan ka turjumeynin mowqifka Ingiriiska.